Barnaamijyada Badbaadada - Gargaarka Gargaarka ee Musiibada
Bogga ugu weyn/Barnaamijyada Badbaada
Erayada madaxii hore ee shaqaalaha ee Black Panther Party, barnaamijyada badbaadada waxaa loola jeedaa "in la daboolo baahida degdegga ah ee dadka isla mar ahaantaana kor loo qaado miyirkooda". Waa barnaamijyo badbaado oo sugaya kacaan.
Dib-u-dhiska Barnaamij Dunida Ka Wanaagsan
Iyada oo qayb ka ah barnaamijkayaga Dib-u-dhiska Barnaamij Ka Wanaagsan Dunida, waxaan ku hawlannahay hawlo ay ka mid yihiin nadiifinta qashin-qubka, saqafka jiifka, nadaafadda, hagaajinta iyo dib-u-dhiska guryaha shaqsiyaadka iyo dhismayaasha bulshada sida iskuulada iyo kaniisadaha, iyo waxbaridda iyo bixinta waxyaabaha lagama maarmaanka u ah ka badbaadayaasha musiibada inay si badbaado leh u nadiifiyaan oo dib u dhisaan.
Barnaamijka Qaybinta Alaabada
Barnaamijyada Qaybinta Agabyadayada, waxaan u qeybineynaa biyo, cunno, xafaayad, warqad musqusha, dhar, nadiifinno iyo sahay kale oo toos ah loogu talagalay ka-badbaadayaasha musiibada, waxaanan dejinnaa xaruumo qaybinta halkaas oo xubnaha bulshada ay ka heli karaan badeecadaha loo baahan yahay iyadoon aabbanimo ama sharci-jebin loo marin, xeerar, xafiis-sharciyeed ama sharooto casaan ah.
Iyada oo qayb ka ah Barnaamijkeena Fayo-qabka, waxaan sameysanay xarumo caafimaad iyo xarumo caafimaad oo bulshada inta ay musiibadu dhacdo, waxaan u dirnaa kooxo wareega taleefanka gacanta, dhakhaatiirta dhirta, daaweeyeyaasha duugista, cirbadaha dhakhaatiirta, dhakhaatiirta, iyo aqoonyahannada kale ee aagagga musiibada si ay gargaar caafimaad ugu fidiyaan badbaadayaasha musiibada iyo shaqaalaha gargaarka. Tan waxaa ka mid ah bixinta gargaarka degdega ah ee cilmi nafsiga, la talinta dhaawacyada, yareynta waxyeelada, caafimaadka maskaxda isku faca ah, helitaanka daawada nafaha lagu badbaadiyo, iyo adeegyo kale si kor loogu qaado badbaadada degdega ah iyo shucuurta muddada dheer, maskaxda, iyo fayoobaanta jirka.
Barnaamijka Joogtada ah iyo Barnaamijka Bogsashada Deegaanka
Aynu wajahno. Kuma tirakoobi karno Nestle in aan ku tabarucno biyo ama adeegyo koronto oo gaar loo leeyahay si aan u siino koronto nafo badbaadisa musiibo ka dib. Barnaamijkan, waxaa naloo soo ogeysiiyay ixtiraamka is dhex galka dhammaan nidaamyada nolosha, iyo sidoo kale caadooyinka bulshada iyo waxqabadka. Halkan waxaa ah halka daaqa dooggu uu la kulmo wax ka qabashada musiibada. Waxaan fidinaa aqoonta iyo helitaanka qaababka qaab-dhismeedka dhawaaqa iyo qaab dhismeedka dhaqan ahaan suurtageliya oo bixiya baahiyaha jiritaanka bulshada mana ka faa'iideysan karaan ama ma wasakheyso. Waxaan awood u siineynaa shaqsiyaadka iyo jaaliyadaha inay abuuraan ama dib u soo nooleeyaan jaaliyado kala duwan, adkeysiga oo la kulma duruufaha dabiiciga ah, dhaqaalaha, iyo baahiyaha bulshada iyadoo aan kordhineyno caafimaadka xubnaha jirka, xiriirka, iyo deegaanka dabiiciga ah ee ay ku dhexjiraan. Ficil ahaan, tani waxay qaabeysaa qaab horumarin waara iyo kaabayaal madax banaan, abuurida nidaam biyo nadiifiye, dhisida istaraatiijooyinka qorraxda, iyo jawiga kale ee jawiga iyo dib u dhiska.
Cun Barnaamijka Dadka
Laga bilaabo qaybinta raashinka ilaa jikooyinka wareega ee moobiilka, iyo bixinta cuntada dhaqan ahaan ku habboon, barnaamijkayaga Quudinta Dadka, waxaan la wadaagnaa cunno macaan, nafaqo leh dadka ay masiibooyinku saameeyeen.
Barnaamijka Nolosha Iskuxirka
Ku xirnaanshaha dadka aad jeceshahay musiibada ka dib waa daruuri badbaadayaasha. Iyadoo loo marayo Barnaamijkeena Nolosha Iskuxirka, waxaan ka caawinaa shakhsiyaadka iyo bulshada saameynta ku yeelatay inay ku xirnaadaan midba midka kale iyo adeegyada muhiimka ah. Laga soo bilaabo shabakadaha mesh iyo wifi ilaa raadiyeyaasha gurmadka ilaa gargaarka korontada, waxaan ka caawinnaa badbaadayaasha inay ku xirnaadaan.
Barnaamijka Badbaadada Xoolaha
Eeyaha, bisadaha, iyo xayawaannada kale sidoo kale waxaa saameeya musiibooyinka. Iyada oo loo marayo barnaamijkeena ka-badbaadayaasha xoolaha waxaan ku qaybineynaa sahayda lagama maarmaanka u ah xoolaha, waxaanan ka caawinnaa samatabbixinta iyo dib u dajinta xoolaha la socda.
Barnaamij caan ah oo waxbarasho
Waxaan sidoo kale ku hawlan nahay geedi socod barasho joogto ah oo lala yeesho bulshooyinka aan dhamaanteen nahay macalimiin iyo dhammaan bartayaasha. Iyada oo qayb ka ah Barnaamijkeena Waxbarashada ee caanka ah, waxaan sahaminaa si wada jir ah maadooyinka ay ka midka yihiin kaalmada isweydaarsiga, abaabulka bulshada sida u diyaarsanaanta musiibada, sida loo jebiyo caqabadaha si dadku ay uhelaan waxa ay u baahan yihiin si ay u noolaadaan, iyo micnaha ay leedahay in qaab wanaagsan la yimaado. Waxaan sidoo kale ka fikirnaa masiibada ka dhalan karta iyo ka hortagga dhibaatooyinka iyo waxaan wadaagi karnaa casharadii laga bartay, sidoo kale waxaan wadaagnaa xirfadaha wax ku oolka ah. Tani waxay naga caawinaysaa dhammaan xirfaddayada oo aan dhisnaa bulshada si loogu diyaariyo masiibooyinka mustaqbalka.
Sababta oo ah masiibooyinka waaweyn ee joogsada macnaheedu maahan inaan sameyno. Had iyo jeer waxaa jira masiibooyin socda oo ah sinaan la'aanta bulshada iyo dhaqaalaha. Marka aynaan ka jawaabeynin baahida dadku is-go'aamiyeen ee ku aadan duruufaha, duufaannada, iyo dabka, waxaan codsaneynaa isla mabaadi'da Gargaarka Musiibada ee Mucaawinada ah si aan uga jawaabno masiibooyinka socda ee gumeysiga iyo hanti-goosadnimada, abuurista barnaamijyo badbaado si loo xoojiyo bulshadayada adkaysiga, kor u qaadista miyirka dadka, iyo kordhinta awoodda dadka. Barnaamijyadan badbaadada ah waxaa ka mid ahaa barnaamij dhar dhaqid bilaash ah, timo jare bilaash ah, barnaamij quraac bilaash ah, raashin bilaash ah, kaalmada kuleylinta ee boos celinta dadka asaliga ah inta lagu jiro xilliga qaboobaha, iyo waxyaabo kale oo badan.